'Moonshine' Static Caravan kwi livery yadi. - I-Airbnb
'Moonshine' Static Caravan kwi livery yadi.
Ifama sinombuki zindwendwe onguAnna
Ilula kodwa ithokomele kwaye ithokomele ibhedi yeekharavani ezi-2 ezibekwe kwiyadi yelivery yasezilalini ezolileyo.
Ukulala 2 - 4 self catering. Zonke izinto eziluncedo zibandakanyiwe (iitawuli, ilinen yokulala njl njl).
Misa kwindawo ebukekayo yasemaphandleni ejikelezileyo enemibono emangalisayo yeRipon Cathedral kwindawo enobuhle bendalo obubalaseleyo. Kumnyango weStudley Roger Deer Park kunye neFountains Abbey. Ifanelekile kuye nabani na ojonga iholide yokuhamba / ibhayisekile enesixeko esincinci kodwa esimnandi ngaphakathi komgama wokuhamba.
Le yikharavani endala kodwa ekhululekile kwiyadi yelivery esebenzayo. Uya kuva kwaye ubone amahashe kunye nabanini besiza kwaye behamba kodwa ikharavani ibekwe kwigadi yeziqhamo kunye nokungena kwangasese / indawo yokupaka.
Kukho amagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela elinye.
Ifakwe ngokupheleleyo isicwangciso esivulekileyo ikhitshi / indawo yokuphumla enendawo yokutyela. I-Wi-Fi yasimahla kunye nomabonakude. Umlilo werhasi ubonelela ngomthombo opholileyo og zokufudumeza ukuba kuyimfuneko.
Izinja eziziphethe kakuhle zamkelekile ngexabiso elongezelelweyo le-£3 inja nganye ngobusuku. Ukuba unqwenela ukuza nenja nceda undazise kwangaphambili.
IRipon ikumgama wokuhamba lula (imizuzu eyi-20-25) kwaye ineendawo ezininzi zokutya/zokusela. Sifumaneka kwimizuzu engama-20 ukusuka kwi-A1.
Iimbono ezothusayo kunye neRipon Cathedral elundini. Sikwabonelela ngendawo esisiseko ye-campervans ezizimeleyo okanye iintente. Iimayile zokuhamba okumangalisayo kunye nokukhwela ibhayisekile kwindawo yaseMantla Yorkshire emnyango wakho.
Sineekharavani ezi-2 ezimile kwisiza zombini ezinokubhukishwa.
***** Nceda uqaphele ukuba ikharavani ina 20yrs ubudala kwaye ayisiyondawo ye-5* enqabileyo kodwa amaxabiso am abonisa oku. Ilungele ukubaleka ngexabiso eliphantsi kunye nolonwabo kuye nabani na ofuna ukuphonononga indawo engqongileyo, abathanda amaphandle kunye nezilwanyana zasendle kwaye abaloyiki ivumba lelizwe. Sineendawo ezikhuselekileyo zokugcina iibhayisekile zakho ukuba ujoyina nathi ukujikeleza. Izinja nazo zamkelwe kakhulu ngentlawulo encinci eyongezelelweyo *****
Nceda uqaphele ** asinikeli zifundo zokukhwela okanye ukuvumela iindwendwe ukuba zikhwele amahashe. Amahashe ngabathengi babucala kwaye awafumaneki ukuba aqeshwe. Ukuba ufuna ukukhwela ngelixa ulapha, i-Bewerley Park e-Pateley Bridge okanye i-Swinton Trekking Centre e-Masham ibonelela ngezifundo / ukukhwabanisa.
4.67 · Izimvo eziyi-42
Ndisebenza kwindawo kwaye ndijikeleza yonke imihla. Ndinabo nabasebenzi abahlala esizeni abanokuncedisa ukuba bayafuneka.